သနပ်ခါးမေ: ဖုန်းကို home screen လှလှ ပြောင်းမယ်
Home screen လေးရော icon တွေရော ချစ်စရာလေးတွေ
မြတ်သိချင်တာ မသုံးချင်တော့ရင် default ပြန်လုပ်လို့ရလား မသိ
May Thinn July 14, 2014 at 10:51 PM
@AshleyMyat Sis Defult ပြန်လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ့ download ဆွဲထားတဲ့ icon လေးတွေကို delete ပြန်လုပ်လိုက်ပါ. ပြီးမှ Home Screen မှာ ပြန်ပြီး လိုချင်တဲ့ widget/ app ကိုပြန်ထည့်လိုက်ရင် အရင်လို defult ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်
May Thinn July 14, 2014 at 10:53 PM
မမ မြတ်ကြည် ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ၀မ်းမြောက်ကြောင်းပါဖျာ့ :P
မြတ်ကြည် July 15, 2014 at 9:24 AM
Anonymous July 15, 2014 at 1:55 AM
ညီမလေးမြတ်ကြည်ရော၊ ညီမလေး မေသင်းရောကျေးဇူးပါနော်။ အမ Line Deco လေးလဲ down ပြီးပြီ။ wallpaper လေးလဲ ပြောင်းကြည့်တာရတယ်။ ဒါပေမယ့် Icon လေးတွေပြောင်းတော့ "No more room for this icon" ဆိုလားပဲ အဲ့ဒါပဲပေါ်ပေါ်နေပြီး icon တွေ မပြောင်းသွားဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်? Icon ပေါ်ဖို့ sheet မလောက်လို့လားဆိုပြီး wallpaper sheet အလွတ်တွေထပ်တိုးယူထားပေမယ့်လဲ same error ပဲပေါ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့....Icon လေးတွေချစ်လို့ လိုချင်ပါတယ်ဆိုမှ :'(
မြတ်ကြည် July 15, 2014 at 9:28 AM
Sis, after the icons you chose appear, you need to tick the box assign to home screen to the icons you want to appear on your home screen. If it still does not work, you'd better ask May thynn :P
10Q Dear :-)
Now I try to choose assign to home screen but still does not work :-(
မြတ်ကြည် July 17, 2014 at 4:55 AM